ပရိတ်သတ်တွေကို သူမတို့မိသားစုကိစ ္စနဲ့ပတ်သက်ြ့ပီးအကူအညီတစ်ခုတော င်းခံလာတဲ့ ပြေတီဦးရဲ့အမဖြစ်သူ ငွေတီဦး…. – Cele Lover
ပရိတ်သတ်တွေကို သူမတို့မိသားစုကိစ ္စနဲ့ပတ်သက်ြ့ပီးအကူအညီတစ်ခုတော င်းခံလာတဲ့ ပြေတီဦးရဲ့အမဖြစ်သူ ငွေတီဦး….
နောက်ပြီးတော့လဲဖုန်းကလဲ Anniversaryတုန်းကကိုယ် ကသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဖုန်းမို့နှမြောမိတယ်၊တကယ်လို့များအဟောင်းဈေးနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုပြန်ဝယ်ချင်ပါတယ်၊ဘယ်သူ့မှလဲမတိုင်ပါဘူး။ContactတွေDataတွေနှမြောလို့ပါငါ့မောင်ရေ၊ပြောချင်တာလဲမယုံမှာစိုးလို့မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး၊မင်းပြောခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားဆန်တဲ့နာမည်လဲအမဒီထဲ ထည့်မရေးသလို၊မင်းဖုန်းနံပါတ်လဲမပြောထားပါဘူးဆိုပြီးတော့အကူ အညီတောင်းလာပြန်တယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့မရောင်းရသေးရင်ဖြစ်ြ ဖစ်စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်သွယ်ပါ၊နေမကောင်းဖြစ် ရောဂါခံစားနေရတဲ့သူ့ဖုန်းလေးပြန်ဝယ်ပေးချင်လို့ပါ၊ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ ကတိလဲပေးတယ်၊တကယ်လဲလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားလဲမရှိပါဘူး၊ဒီအတောအတွင်းကိုဉာဏ့်ဖုန်းကိုဆက်လို့မရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအထူးတောင်းပန်ပါတယ်နော်။ဖုန်းယူသွားတဲ့တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊သူ့ဆီကပြန်ဝယ်မိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီPostကိုတွေ့ပါစေဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာရေးသားဖော်ပြလာပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ့သတ်ကြီးများအတွက်ပြနအလည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိတ္သတ္ေတြကို သူမတို႕မိသားစုကိစ ၥနဲ႕ပတ္သက္ျ႔ပီးအကူအညီတစ္ခုေတာ င္းခံလာတဲ့ ေျပတီဦးရဲ႕အမျဖစ္သူ ေငြတီဦး….
ေနာက္ၿပီးေတာ့လဲဖုန္းကလဲ Anniversaryတုန္းကကိုယ္ ကသူ႔ကိုလက္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ဖုန္းမို႔ႏွေျမာမိတယ္၊တကယ္လို႔မ်ားအေဟာင္းေဈးနဲ႔ေရာင္းမယ္ဆိုျပန္ဝယ္ခ်င္ပါတယ္၊ဘယ္သူ႔မွလဲမတိုင္ပါဘူး။ContactေတြDataေတြႏွေျမာလို႔ပါငါ့ေမာင္ေရ၊ေျပာခ်င္တာလဲမယုံမွာစိုးလို႔မေျပာျဖစ္ခဲ့ဘူး၊မင္းေျပာခဲ့တဲ့တိုင္းရင္းသားဆန္တဲ့နာမည္လဲအမဒီထဲ ထည့္မေရးသလို၊မင္းဖုန္းနံပါတ္လဲမေျပာထားပါဘူးဆိုၿပီးေတာ့အကူ အညီေတာင္းလာျပန္တယ္။
ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့မေရာင္းရေသးရင္ျဖစ္ျ ဖစ္စိတ္ဝင္စားရင္ဆက္သြယ္ပါ၊ေနမေကာင္းျဖစ္ ေရာဂါခံစားေနရတဲ့သူ႔ဖုန္းေလးျပန္ဝယ္ေပးခ်င္လို႔ပါ၊ဘာမွမလုပ္ဘူးလို႔ ကတိလဲေပးတယ္၊တကယ္လဲလုပ္နိုင္တဲ့အင္အားလဲမရွိပါဘူး၊ဒီအေတာအတြင္းကိုဉာဏ့္ဖုန္းကိုဆက္လို႔မရတဲ့မိတ္ေဆြေတြကိုအထူးေတာင္းပန္ပါတယ္ေနာ္။ဖုန္းယူသြားတဲ့တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊သူ႔ဆီကျပန္ဝယ္မိတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ဒီPostကိုေတြ႕ပါေစဆိုၿပီးေတာ့သူမရဲ့လူမႈကြန္ယက္ထက္မွာေရးသားေဖာ္ျပလာပါတယ္၊စာဖတ္ပရိတ့သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပနအလည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Previous Article သရုပ်ဆောင်၊အဆိုတော် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ ယနေ့မနက်မှာပဲ ကိုဗစ်ကြောင့် ကွယ်လွန်သွားခ‌ဲ့ပါတယ်
Next Article နွေဦးထီကိုအားပေးသော K-pay account ၄၀ ကို ဆိုင်းငံ့ထားရန် စစ်ကောင်စီက ညွှန်ကြား